Ezi zezi bhanyabhanya zokuqala zeHBO Spain kunye nothotho | Iindaba zeGajethi
Abasebenzisi abaninzi bebanga ixesha elide ukuba HBO ukufika kwayo eSpain ukuze ikwazi ukonwabela konke okukuyo. Nangona bebebuzwa okuninzi, ukusukela izolo inkonzo yokusasaza ngoku isemthethweni kwilizwe lethu, ikwavela esandleni seVodafone, eya kuthi iyinike abathengi bayo, simahla kangangenyanga.
Inkampani yefowuni ephathekayo iyaqhubeka nokubheja kakhulu kolu hlobo lweenkonzo kwaye i-HBO Spain iya kubandakanywa ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo kwiVodafone One M, L, XL okanye iVodafone One package eneTotal TV nakwiRed M, L okanye XL mobile. amaxabiso. Ngokumalunga nomxholo, sinokuthi ikhathalogu yenkonzo iya kuba nkulu kwaye yahluke kakhulu.
Ixabiso le-HBO Spain, ngokolwazi olunikezwe nguVodafone luya kuba njalo 7.99 euro, eya kuyibeka kwinqanaba leNetflix, nangona silinde ukwazi ukuba singayisebenzisa na inyuselo esivumela ukuba sonwabele inkonzo kwizixhobo ezingaphezulu kwesinye ngemali encinci.
Ukubuyela kwikhathalogu, Zithini iimuvi zokuqala kunye nothotho esinokuthi silonwabele kwi-HBO Spain esele iqinisekisiwe. Apha sikubonisa ezinye zazo;
Iintsomi zeDC zeMso
Ukwabelana ngesondo eNew York
Ukongeza, kwi-HBO Spain asizokwazi kuphela ukubona umxholo we-HBO kodwa siya kuba nakho ukubona inani elikhulu leemovie kunye noluhlu lwamaxesha onke, kuyo yonke iminyaka kwaye ngokuqinisekileyo oko kusenza sonke sonwabe kakhulu .
Ngaba sele ucinga ukuba uza kubhalisa kwi-HBO Spain nje ukuba ifumaneke ngokusemthethweni?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ezi ziimiboniso bhanyabhanya zokuqala zeHBO Spain kunye noluhlu
IHuawei P10 ibonwa okokuqala kwimifanekiso emininzi evuzayo